သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအောက်သို့လှည့်ရန်အချိန်ရောက်ပြီ Martech Zone
ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြသည့်အခါများသောအားဖြင့် ၀ န်ထမ်းများကိုသူတို့အစီရင်ခံတင်ပြသောအဆင့်အတန်းကိုသိသာထင်ရှားစေသည်။ ပါဝါနှင့်လျော်ကြေးငွေနှင့်အတူသူတွေကိုအစဉ်အမြဲ၏ထိပ်ပေါ်မှာစာရင်းပြုစုထားပါသည် အရေးကြီးပုံ .
ဒါဟာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်ဖောက်သည်ကိုအဆင့်ဆင့်၏အောက်ခြေတွင်ထားစေသည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှအလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များအားကိုင်တွယ်သော ၀ န်ထမ်းများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အနိမ့်ဆုံးလစာ၊ အတွေ့အကြုံ၊ အရေးမကြီး ကုမ္ပဏီအတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်။ က ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်လှုံ့ဆော်ပေး ကွာ ဖောက်သည်ထံမှနှင့်ပြissuesနာများကိုနေသောနေရာတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ into သို့ ဆိုးရွားလာခဲ့သည် မန်နေဂျာကို ၀ န်ထမ်းများသည်လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်ယုံကြည်မှု၊ အခွင့်အာဏာနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် ဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များဖြည့်ဆည်း.
ဒါကိုခင်ဗျားအနေနဲ့စဉ်းစားဖူးလား ဖောက်သည်? သင်ဟာအရေးပါမှုကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားတယ် အောက်တွင် နိမ့်ဆုံးဝန်ထမ်း၏။ အနိမ့်ဆုံးလစာ၊ သက်တမ်းအနည်းဆုံးနှင့်ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများရှိသော ၀ န်ထမ်းများ။ ကောင်းတယ် အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ ဖောက်သည်များပုန်ကန်နေကြသည်!
သူငယ်ချင်း Kyle Lacy မကြာသေးမီက Jason Baer ၏စာအုပ် Convince နှင့် Convert ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်:
Jason ၏စကားအရဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံတွင်ရှေ့တန်းတွင်ရောက်နေသည်။ အမှတ်တံဆိပ်များ၏အတွေးများနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုလူတော်တော်များများယုံကြည်လိုသည့်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲကျွန်ုပ်တို့၏ rooms ည့်ခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စုရုံးနေရာများနှင့်ကီးဘုတ်များဖြင့်ဖန်တီးထားသည်။
Zappos ရဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်းခင်ဗျားဖတ်တဲ့အခါ၊ Tony Hsieh သည်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်လက်၍ သူ၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်များသည် ၀ ယ်သူအားကူညီရန်မည်သို့မည်ပုံလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုသည်ကိုဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်လျော်ကြေးပေးခြင်းအဆင့်ဆင့်၏အောက်ဆုံး၌ရှိနေသော်လည်း Zappos ထိထိရောက်ရောက်ပါဝါအဆင့်ဆင့်ပြောင်းပြန်သိရသည်။
ကုမ္ပဏီအားလုံးသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောသတင်းပို့မှုနှင့်အာဏာတည်ဆောက်ပုံကိုဖြိုဖျက်ပြီးနောက်ပြန်လှည့်လိုက်သည်။ ဖောက်သည်များကိုသင်၏အဆင့်ဆင့်၏ထိပ်ဆုံးတွင်ထားသင့်သည်။ သင်၏ရှေ့တန်း ၀ န်ထမ်းများသည် ၀ ယ်ယူသူများအတွက်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချသင့်သည်။ သင်၏မန်နေဂျာများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သင့်သည် နားထောင်နေသည် သင်၏ ၀ ယ်ယူသူများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်၎င်းတို့၏ထည့်သွင်းမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ရေရှည်မဟာဗျူဟာများချမှတ်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီများအတွက်ကျွန်ုပ်ပိုမိုအလုပ်လုပ်လေလေအကြီးမားဆုံးသောခေါင်းဆောင်များသည်အရင်းအမြစ်များကိုထိရောက်စွာအသုံးချခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းများအားစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ တိုင်း ဖောက်သည်။ ငါသွားရောက်လည်ပတ်ရုန်းကန်ဘုတ်အဖွဲ့အခန်းတိုင်းသူတို့ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်, သူတို့ကသူတို့ရှိရာအရပ်၌ဖြစ်ထိုက်, သူတို့ဖောက်သည်ထက်ပိုကောင်းကိုသိသောသူတို့ထင်သောဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ narcissists နှင့်ပြည့်၏။
ဒီစီးပွားရေးကျဆင်းမှုရဲ့အံ့ by ဖွယ်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တစ်ခုကတော့ဒီလူတွေယင်ကောင်တွေကျလာတာကိုငါတို့မြင်နေရတာပါ။ သင်၏ဖောက်သည်အဆင့်ဆင့်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမည်သို့ကြည့်ရှုသနည်း။ ၎င်းတို့သည် power chain ၏ထိပ်ဆုံးသို့မဟုတ်အောက်ခြေတွင်ရှိပါသလား။ စဉ်းစားပါ။
ဇွန်လ4ရက် 2009 ခုနှစ် နံနက် 1 နာရီ 21 မိနစ်
ဇွန်လ4ရက် 2009 ခုနှစ် နံနက် 10 နာရီ 47 မိနစ်
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ post, အဖြစ်မှန်အတွက် execute ဖို့ခက်ခဲပေမယ့်။
ဇွန် 4, 2009 မှာ 1: 39 pm တွင်
ဇွန် 4, 2009 မှာ 2: 04 pm တွင်
ဇွန်လ5ရက် 2009 ခုနှစ် နံနက်7နာရီ 14 မိနစ်